UZach King, ukumkani we-Instagram kunye noMdiliya, utyhila ezona mfihlo zakhe zibalaseleyo | Iindaba zeGajethi
UZach King, ukumkani we-Instagram kunye noMdiliya, utyhila ezona mfihlo zakhe zibalaseleyo
UPablo Ortega | | ngokubanzi, Izaziso, I intanethi
Ndiyathanda ukudibana nabalandeli bam abavela kwihlabathi liphela! ? Enkosi kubantu baseChile ngokumangalisa kule veki !!!
Ividiyo ethunyelwe nguZach King (@zachking) kwi Juni 19, 2015 kwi-6: 09am PDT
Izolo besinethuba lokudibana ngokusondeleyo noZach King, waseMelika oselula oye wakwazi ukoyisa iinethiwekhi zentlalo ngexesha elifutshane kakhulu. Siqinisekile ukuba ngamanye amaxesha uya kudibana nevidiyo yakhe engaqhelekanga kwi-Instagram, Facebook okanye kwiVini. King, okwabizwa ngokuba ngu "I-Final Cut King", yongeza abalandeli abayi-4.8 yezigidi kwi-Instagram Kwaye uyinkwenkwezi esebenze kwimicimbi ekhethekileyo njengomsitho wokugqibela we-Oscars kwaye ukwazile ukuhamba kwihlabathi liphela.
Saya kwivenkile ye-AT & T eseNtshona Hollywood (eLos Angeles) ukuya thetha noZach King kwaye ufunde ezinye zeemfihlo zakhe. UKumkani wakhulela kwiphondo lase-Oregon kwaye uyakhumbula, ngoncumo emlonyeni wakhe, ngendlela awasebenzisa ngayo amalungu osapho ukwenza zonke iintlobo zamahlumela asekhaya. Wayesoloko esazi ukuba ufuna ukuzinikela kwilizwe le-cinema kwaye yile nto yamkhokelela eLos Angeles. Into yokuba engamkelwanga eyunivesithi apho wayefuna ukufunda ayizange imtyhafise kwiinjongo zakhe zomsebenzi.
Kwiividiyo zakhe sinokubona ukuba uZach ayihlali entliziyweni yemecca ye cinemaKuba ukufotwa kwenzeka kwindawo yokuhlala emaphethelweni esixeko: "Ndikhethe ukuhamba kwindawo yendalo, endlwini apho iividiyo esizifotileyo zingabonakala ngcono," ucacisa uZach King. Kwaye esi sesinye sezitshixo sempumelelo kakumkani we-Final Cut, kodwa zininzi ezinye. UKumkani usebenza neqela labantu abane abamncedayo kuyo yonke ifilimu: ukusuka kwingqikelelo yeengcamango, ekudalweni kwamabhodi amabali, ngokuqhubeka nokwakhiwa kweziqendu kunye nokuphela kwenkqubo enzima yokuhlela nokubuyisela kwakhona iziphumo ezizodwa .
Ezi vidiyo zinokuba malunga nemizuzwana eyi-15 ubude ngamanye amaxesha, kodwa inyani yile imveliso inokuhlala ukuya kwiintsuku ezininzi. UZach King uyavuma ukuba ngamanye amaxesha ezi vidiyo zibandakanya ngaphezulu kwama-50. Le yenye yazo:
Phantse ukuphoswa yindawo yokumisa uloliwe.
Ividiyo ethunyelwe nguZach King (@zachking) kwi Okthoba 14, 2014 kwi-5: 51pm PDT
Kwiividiyo ezinje ngale, iqela likaZach King kufuneka lihlele nganye kunye nezakhelo ukuze umlingo oqikelelweyo ube sengqiqweni kwaye umbukeli angaboni ubuqhetseba bohlelo. Enye into enomdla esiyifumeneyo kukuba zonke iaudiyo kwiividiyo zirekhodwe kwimveliso yeposi, ukuze umgangatho wesandi ugqibelele. Kwaye ezinye zezi zinto zirekhodwayo zikwadibanisa iziphumo zesandi ezirekhodwa kunye nobunyani obunokwenzeka. Umzekelo, kwimeko yevidiyo esiyivezileyo, isandi esasivayo xa uZach King engena emnyango sabhalwa nguKin ngokwakhe.Ukungena emnyango weelifti kwihotele ababehlala kuyo.
Yeyiphi indawo kaZach King ayithandayo yokuhlela iividiyo zakhe? Inkwenkwezi yeVine isibonisa ifoto ehlekisayo yakhe ehlamba ephethe ilaptop yakhe. Uburharha abusileli, into ebalulekileyo ekutsaleni izigidi zabalandeli kwihlabathi liphela. Kwezinye iividiyo zakhe simbonile enxibelelana nabalandeli kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba.
Ndonwabe kakhulu ukudibana @zachking, inkwenkwezi yam endiyithandayo kwezentlalo! #TTLA izakuhlala naye kwiPeriscope
Ifoto eposwe nguPablo Ortega (@paullenk) kwi Juni 30, 2015 kwi-11: 50am PDT
Sinyanzelisa, kwakhona, ukuba uninzi lweevidiyo zabo yimizuzwana embalwa ubude, kodwa ngamanye amaxesha iqela lemveliso alikhangeli kwiindleko zemveliso ukwenza lo mlingo ube yinyani. Kwezinye "emva kweziqhushumbisi" uZach King usibonisa ukuba sinokubona njani ngamanye amaxesha Kusetyenziswa iikhreyithi (ukuze ubhabhe ujikeleze amanqanaba). Ngamanye amaxesha, kwehla iintlekele zekhaya. Kwenye yezi ngozi, iqela liphume esandleni xa itanki leentlanzi ligqabhukile kwaye indlu ebebefota kuyo izele ngamanzi. "Sisachacha kumonakalo esiwenzileyo emhlabeni," uqhula uKing.
Omnye umdiliya onomdla yenye apho sibona uKing esiya ngasemthonjeni kwaye ngequbuliso ubamba ibhatyi yakhe kwaye abuye umva ngaphambi kokuwela emanzini. UZach King usibonisa indlela ihlumelo elinokubonakala lilula ngokwenyani alikho. Inyaniso, le kliphu imhlawule iindleko ezininziKuba ukugcina ibhalansi yakhe kwakunzima kuye kwaye wawela emthonjeni izihlandlo ezininzi.
Ukuzibamba ekwindla. ? Thega abahlobo aba-2 abahlala bejonga iifowuni zabo ngelixa behamba
Ividiyo ethunyelwe nguZach King (@zachking) kwi Jan 3, 2015 kwi-8: 55am PST
Udumo kunxibelelwano lwentlalo luziphatha kakuhle ngalo menzi bhanyabhanya umncinci, ongazukuyalelwa kwixesha elizayo ukuba angene kwimiboniso bhanyabhanya. Lo ngumceli mngeni wakho olandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UZach King, ukumkani we-Instagram kunye noMdiliya, utyhila ezona mfihlo zakhe zibalaseleyo
Inqanaba U I-Bluetooth Iseti yentloko engenazingcingo, ii-headphone zokusebenza ze-Samsung
I-Spotify, i-Apple Music, iTidal kunye neGoogle Play Music zibeka ubuso ngobuso